Programmer's Diary: မုန်တိုင်းအကြို ရာသီဥတု
၂၀၀၈ မှာ ဆိုင်ကလုန်း၊ တိုင်ဖွန်း၊ ဟာရီကိန်းတွေ တစ်လုံးပြီး တစ်လုံး တိုက်ခတ်နေပြီးတဲ့နောက် အမေရိကန် စီးပွားရေး မဏ္ဍိုင်ကြီးဖြစ်တဲ့ ဝေါစထရိက ရင်းနှီးမြုပ်နှံရေး ဘဏ်ကြီးတွေမှာလည်း မုန်တိုင်းအသစ် တစ်မျိုး ၀င်ရောက် နေပါပြီ။
မုန်တိုင်းရဲ့ ဗဟိုကတော့ မနှစ် ဇူလိုင်လောက်ကတည်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Subprime ချေးငွေတွေက စတာပါပဲ။ ဘဏ်တွေ ရင်းနှီးမြုပ်နှံရေးကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာ အိမ်ရာ ၀ယ်သူတွေကို အလိုလိုက်ပြီး သေသေချာချာ မစီစစ်ဘဲ အိမ်ဝယ်ဖို့ ချေးငွေတွေ ရက်ရက်ရောရော ထုတ်ပေးခဲ့ကြတယ်။ အရစ်ကျငွေတွေ ပြန်မဆပ်နိုင်တဲ့ အခါမှာ ပိုက်ဆံမရှိဘဲ ၀ယ်ထားတဲ့သူတွေဟာ အိမ်ကို အဆုံးခံလိုက်တယ်။ ဒီတော့ ငွေစိုက်ထုတ်ပြီး ၀ယ်ပေးခဲ့ရတဲ့ ဘဏ်တွေခမျာ အိမ်ဂရမ်တွေ ကိုင်ပြီး ငွေပေါ်အောင် ပြန်ရောင်းဖို့ ကြိုးစားရတယ်။ ဒါနဲ့ ၀ယ်လိုအားထက် ရောင်းလိုအားက များလာပြီး အိမ်ရာဈေးတွေ ထိုးကျလာတယ်။ တက်ဈေးနဲ့ ၀ယ်ထားရတဲ့ အိမ်တွေကို ကျဈေးနဲ့ ထိုးရောင်းရတဲ့အခါ ရင်းနှီးမြုပ်နှံထားတဲ့ဘဏ်တွေ အထိနာပါတော့တယ်။
အမေရိကန်ရဲ့ အိမ်ရာဈေးကွက်မှာ ချေးငွေ ဖောဖောသီသီ ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ Fannie Mae နဲ့ Freddie Mac ကုမ္ပဏီတွေ အတော်လေး ပြုတ်ထွက်သွားတာမှာ အမေရိကန် Federal Reserve က လက်မတင်လေး ၀င်ကယ်ခဲ့ရတယ်။ မတ်လမှာ နောက်ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ထပ်ပြီးထိတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့မှာ Lehman Brothers ဆိုတဲ့ အမေရိကန်မှာ စတုတ္ထမြောက်အကြီးဆုံး ရင်းနှီးမြုပ်နှံရေးဘဏ်ကြီး ဒေ၀ါလီခံလိုက်ရတယ်။ သူလည်း နှယ်နှယ်ရရတော့ မဟုတ်ဘူး။ တည်ထောင်ခဲ့တာ ၁၅၈ နှစ်ကျော် ရှိတဲ့ ဘဏ်ကြီးတစ်ခုပဲ။ ဒါပေမယ့် အကြွေးတွေ ခေါင်ခိုက်နေတယ်။ ဖတ်မိသမျှ ၆၀၀ ကနေ ၈၀၀ ဘီလျံလောက် အထိ အကြွေးတင်သွားတယ်။ ဒါကိုတော့ Federal Reserve လည်း ၀င်မကယ်ဘဲ လက်ပိုက်ကြည့်နေလိုက်ရတယ်။ ဗြိတိန်မှာ ရှိတဲ့ Barclays ဘဏ်က Lehman ကို ၀ယ်ဖို့ လုပ်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာ Lehman ခမျာ ကူသူ မရှိ ကယ်သူမရှိဘဲ Chapter 11 အရ ဒေ၀ါလီ ခံလိုက်တယ်။ Lehman ရဲ့ အချို့ ဌာနတွေကို Barclays ဘဏ်က ခပ်ပေါပေါဈေးနဲ့ ရလိုက်တယ်။
အမေရိကန်မှာ ကုမ္ပဏီတွေ ဒေ၀ါလီခံတဲ့အခါ ဥပဒေရှိတယ်။ တစ် မျိုးက Chapter 7.. နောက်တစ်မျိုးက Chapter 11 ဖြစ်တယ်။ Chapter7အရ ဒေ၀ါလီခံရင် လုပ်ငန်းတွေကို ချက်ချင်း ရပ်ဆိုင်းလို့ ရှိသမျှကို ရသလောက်ဈေးနဲ့ အကုန်ထုတ်ရောင်းပြီး မြီရှင်တွေကို အကြွေးဆပ်ရတယ်။ ကုမ္ပဏီလည်း ဖျက်သိမ်းရတယ်။ Chapter 11 အရ ဒေ၀ါလီခံတယ် ဆိုရင်တော့ လုပ်ငန်းတွေကို ချက်ချင်း ရပ်ဖို့ မလိုဘူး။ ရောင်းလို့ရတာတွေကို သေသေချာချာ စုစည်းပြီး တဖြေးဖြေး ရောင်းနိုင်တဲ့အတွက် ငွေပိုပြီး ပေါ်တယ်။ တချို့ ကန်ထရိုက်တွေကို လျှော်ပစ်နိုင်ပြီး တချို့ ကန်ထရိုက်အကြွေးတွေကိုတော့ ရတဲ့ ငွေနဲ့ ပြန်ဆပ်နိုင်တယ်။ ကြွေးမြီတွေ အားလုံး ရှင်းပြီးသွားပြီ ဆိုရင် ကုမ္ပဏီကို ပြန်ထူထောင်နိုင်တယ်။
Lehman ဒေ၀ါလီ ခံသွားရတော့ သူ့ကို တဆင့် ငွေချေးထားတဲ့ ဘဏ်တွေလည်း အတော် ဒုက္ခရောက်ကြတယ်။ ချေးငွေအများဆုံး ထုတ်ချေးထားတဲ့ ဘဏ်တွေ ထဲမှာ ဂျပန်က ဘဏ်တွေလည်း ပါတယ်။ ဘီလျံပေါင်းများစွာ ထုတ်ချေးထားတာ။ Lehman ဒေ၀ါလီ ခံရတဲ့ တချိန်တည်းလိုလိုမှာပဲ အခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံရေး ဘဏ်ကြီး တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Merrill Lynch ပြိုလဲ မလို ဖြစ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ကိုတော့ Bank of America (BoA) က အချိန်မီ ၀င်ကယ်လိုက်တယ်။ ဒီတော့ Merrill Lynch ရဲ့ ရှယ်ယာတွေဟာ BoA ရဲ့ လက်ထဲ ရောက်သွားတယ်။ စင်္ကာပူ အစိုးရရဲ့ ငွေတွေနဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေ လုပ်နေတဲ့ GIC (Gov. Investment Corp) ဟာ တလောကပဲ Merrill Lynch ရဲ့ ရှယ်ယာတွေ ၂၀ ဘီလျံဖိုးလောက် ၀ယ်လိုက်တာ သတင်းထဲ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ အခု Merrill Lynch ကို BoA သာ ၀င်မကယ်ဘဲ Lehman နောက်သာ လိုက်ရမယ် ဆိုရင် GIC ရဲ့ ရှယ်ယာတွေ ပလုံသွားမှာပဲ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် BoA က ၀ယ်ပြီးတဲ့နောက်ရော ဒီ ရှယ်ယာ တန်ဖိုးတွေ တည်ငြိမ်နေမယ်လို့ ဘယ်သူက အာမခံရဲလို့လဲ။
အဲဒီလို ပြဿနာတွေ တစ်ခုပြီး တစ်ခု တက်နေတာကို ကာကွယ်ကြဖို့ အမေရိကန်ရဲ့ အကြီးဆုံး ရင်းနှီးမြုပ်နှံရေး ဘဏ်ကြီး ဆယ်ခုဟာ ဒေါ်လာ ၇ ဘီလျံစီ ငွေထုတ်ပြီး ဒေါ်လာ ၇၀ ဘီလျံနဲ့ အရေးပေါ် ရန်ပုံငွေ ထူထောင်လိုက်ရတယ်။ Federal Reserve ကလည်း ဈေးကွက်ထဲမှာ ငွေကြေးလည်ပတ်မှု ရပ်မသွားစေဖို့ ဘီလျံရာနဲ့ချီ သွင်းပြီး လည်ပတ်အောင် လုပ်ပေးနေရတယ်။ ဒီဂယက်ဟာ အမေရိကသာ မက ဥရောပ နဲ့ အာရှမှာပါ အတော်လေး ဂယက်ရိုက်ကုန်တယ်။ စတော့ဈေးကွက်ရဲ့ ညွှန်းကိန်းတွေ အကုန်နီးပါး ထိုးကျသွားတယ်။ အီးယူနဲ့ ဂျပန်အစိုးရတွေဟာ Federal Reserve လိုပဲ ဈေးကွက်ထဲမှာ ငွေကြေးလည်ပတ်မှု ရပ်မသွားစေဖို့ ဘီလျံပေါင်းများစွာ ထပ်မံ ထည့်သွင်းပြီး လည်ပတ်အောင် လုပ်ပေးနေရတယ်။ စင်္ကာပူ အစိုးရကလည်း လိုအပ်ရင် အဲဒီလို လုပ်ပေးနိုင်အောင် အခြေအနေကို အကဲခတ်နေတယ်။
Lehman နဲ့ Merrill Lynch တို့ရဲ့ ခြေရာကို နင်းဖို့ တံခါးခေါက်သူက .. AIG ။ အင်္ဂလန်မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ဘောလုံးအသင်းကို စပွန်ဆာပေးထားတဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အာမခံကုမ္ပဏီကြီး တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ AIG ရဲ့ ရှယ်ယာတွေဟာလည်း အရှိန်ခပ်ပြင်းပြင်းနဲ့ ၅၀-၆၀% ကျော်လောက် ကျသွားတယ်။ Federal Reserve က တစ်ရက်အချိန်ပေးပြီး ငွေ ၈၀ ဘီလျံလောက် ထုတ်ချေးဖို့ စဉ်းစားတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ AIG ရဲ့ အာမခံပေါ်လစီတွေကို ၀ယ်ထားတဲ့သူတွေ သန်းပေါင်းများစွာ ရှိတယ်။ နောက်တော့ ထုတ်ချေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး AIG ရဲ့ ရှယ်ယာ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကို လက်လွှဲရယူလိုက်တယ်။
AIG ရဲ့ လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ AIA စင်္ကာပူ ရုံးမှာတော့ မနေ့ကတည်းက အတော်လေး လူစည်ကား နေတယ်။ အာမခံပေါ်လစီ ပြန်အပ်ချင်သူတွေလည်း ပါတယ်။ အခြေအနေကို တိတိကျကျသိချင်သူတွေလည်း ပါတယ်။ စင်္ကာပူမှာ AIA က ရောင်းထားတဲ့ အာမခံပေါ်လစီ စုစုပေါင်း ၂ သန်းလောက် ရှိတယ်လို့ ဖတ်ရတယ်။ အခုတော့ AIG ကိုလည်း အမေရိကန် အစိုးရရဲ့ Federal Reserve က ၀င်ကယ်လိုက်ပြန်ပြီ ဆိုတော့ စိတ်ပူနေသူတွေ သက်မ ချနိုင်တော့မယ် ထင်ပါရဲ့။
နောက်တစ်ခါ ဘယ်သူ့အလှည့်လဲ ဆိုတာ အားလုံးက ရင်တမမနဲ့ စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံရေးပါရဂူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဆိုးရော့စ်ကတော့ အခြေအနေတွေ ဒီထက် ပိုဆိုးလာနိုင်တယ်လို့ ဆိုတယ်။ သေချာတာတော့ Federal Reserve လည်း ပြိုမလို ဖြစ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတိုင်းကို ၀င်ပြီး တာဝန်ယူနိုင်မယ် မထင်ဘူး။ တချို့ ကုမ္ပဏီတွေကို Lehman ဒေ၀ါလီခံ သွားရသလို လက်ပိုက်ကြည့်နေရတော့မှာပဲ။
ဒီ ငွေကြေးဈေးကွက်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေဟာ အမေရိကန် သမ္မတလောင်း ရွေးကောက်ပွဲ အပေါ် လွှမ်းမိုးမှု ကြီးနိုင်လိမ့်မယ်။ အီရတ်အရေး၊ လူထု ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု၊ ပညာရေးအတွက် အပြောင်းအလဲ၊ ၀ါရှင်တန်ရဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ အရေးကြီးသလို အခု ပြဿနာတွေကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းမလဲဆိုတာ အသစ်တက်လာမယ့် အမေရိကန်သမ္မတအတွက် စိန်ခေါ်မှု တစ်ရပ် ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
ဒီ မုန်တိုင်းက အခုမှ အစပဲ ရှိသေးတယ်လို့ ထင်နေတယ်။ ဟိုးတုန်းက ကြားဖူးတဲ့ ၁၉၃၀ ၀န်းကျင်က စီးပွားပျက်ကပ် ဘာညာ တစ်ပတ်ပြန်လည်လာဦးမလား။ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အခြေအနေတွေမှာ ဘယ်လို အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ပြီး အဲဒီ ဂယက်ရိုက်မှုတွေကို ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာနဲ့ ဘယ်လောက်ကြာကြာ ခံစားရဦးမလဲ မသိပါဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ရာသီဥတုက ကိုယ့်ဘက်မှာ ရှိမနေတော့ အစစ အရာရာ နားစွင့် မျက်စိဖွင့်ထားဖို့ လိုမှာတော့ အသေအချာပဲ။
ရေးသူ- ညီညီ(သံလွင်) ၊ ရေးသည့်အချိန်- 3:36 PM
ညီညီရေ .. အဲဒီကိစ္စက မထင်မှတ်ပဲ ဖြစ်တာတွေပဲ ။ တကယ်ပဲ မျက်စိဖွင့် နားစွင့်ထားရမယ် ။
ဒီပို့စ်လေးက အချက်အလက်တွေကို ရှင်း၂လင်း၂ ရေးပြထားတာတွက် ကြိုက်မိတယ် ။
ကိုညီညီ ကျေးဇူးပါပဲ..အခုလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပြပေးတဲ့အတွက်...
September 18, 2008 4:46 AM
thanks for this post...really good
September 18, 2008 6:37 AM
Thanks alots for this post, so precious and reliable information you provide to us.
Kindly try to write that kind of post alots.
ကျေးဇူးပါပဲ ကိုညီညီ။ ခုလိုသေချာရှင်းပြပေးတာ။ သတင်းတွေဖတ်တော့ ဘာလို့အဲဒီလိုဖြစ်တာလဲ နားမလည်ဘူး။ ခုမှပဲရှင်းသွားတယ်။
September 20, 2008 10:57 PM